A ọrụ nke ọ bụla ụlọ ọrụ ma ọ bụ nzukọ a mgbe na-achọ na-elele na yiri ihe na-anya site ọrụ ndị na-eji ndị music ọrụ nke ọ bụla ụlọ ọrụ na ekele Spotify na ha maara na n'ozuzu ọrụ ọnọdụ na ya mere ha mgbe niile na-elu na ego na ndị kasị mma na ọkaibe iji jide n'aka na onye ọrụ na-dọtara na ịrafu azụmahịa n'ihi na n'aka. E nwere ogologo ndepụta nke ego na onye ọrụ kwesịrị maara nke iji jide n'aka na ihe kasị mma e nyere na ụlọ ọrụ nakwa dị ka ngwaọrụ na-eji.
Spotify ego na ụdị na-iche
Ka e kwuru na e nwere ogologo ndepụta ego na mkpọsa ndị a na-agba ọsọ site na ụlọ ọrụ ọbụna na oge nke na-ede nke a nkuzi na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa otu nke kasị mma na nke Steti nke nkà ọrụ na na-enwe. Otú ọ dị ọ gaghị ekwe omume depụta ihe ndị a niile ego ebe a na-maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na top ego na-ụtọ site ọrụ ga ike kwuru bú nkọwa iji jide n'aka na onye ọrụ na-akawanye onye-amasị ya na-eleda ndị ọzọ . Ọ ga-ekwe ka onye ọrụ na-eme ka n'aka na ojiji na-ekpe ikpe na nke kacha mma n'ụzọ. Na-esonụ bụ ndepụta nke a nke na e rubere na nke kacha mma maka ọrụ:
1. Trial version ego
2. 60 ụbọchị free ego
3. Akwụkwọ ego
4. 0,99 ego
5. Ụbọchị 30 agụ
6. Ọnwa 3 ego
Ọ bụ ihe kasị ụdị ego na e availed site ọrụ karịrị oge nke oge na maka otu ihe ahụ ha na-ruo kasị mma na ndị ọkaibe usoro iji jide n'aka na needful a mere enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Iji jide n'aka na ego na-availed onye ọrụ dị nnọọ mkpa ka edebanye maka adịchaghị na akaụntụ na-Job mere:
Ọ bụkwa otu nke kasị mma àjà na-mere ka ahịa ndị na-ebi n'èzí UK na USA ma na-achọ ijide n'aka na Spotify akaụntụ na-kere ina ọrụ ahụ. Ọ na-t-ahụ kwuru na bi kwesịrị ke otu n'ime ndị mba ebe Spotify na-ahụ na ọrụ ndị na-nyere:
3. Mmụta ego
Ọ bụkwa otu nke kasị mma na nke Steti nke nkà ọrụ na e etinyere ka ụmụ akwụkwọ naanị iji jide n'aka na ha ga-esi ihe kasị mma amụọ na a ga esi na nke a. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na adịchaghị na akaụntụ na-aka maka iji jide n'aka na-enye availed enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Iji nweta akwụkwọ ego na-amụrụ kwesịrị ịga leta URL https://spotify.sheerid.com/ na-Job mere na ala na afọ ojuju:
4. 0.99 ego
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na ala nke nkà ọrụ na-awa site na ụlọ ọrụ iji jide n'aka na onye ọrụ na-pacified na ọkọkpọhi kasị mma n'ime oge ọ bụla ma ọlị. Ọ bụ ihe na-enye na-emekwa ka n'aka na ememe nke ọrụ na-mere egwu na ha ga-esi na Spotify adịchaghị maka ọnwa 3 n'ihi na dị nnọọ 0,99 kwa ọnwa. Ọ na-na-kwuru na nke a atụmatụ na-a na-awa ndị ọhụrụ ọrụ nakwa iji jide n'aka na ha ga-esi kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ na ịnọgide na-erubere ụlọ ọrụ dị ka ọma:
5. ụbọchị 30 ego
Ọ bụ aha ọzọ nke e nyere ka ụbọchị 30 free ikpe nke adịchaghị mgbe a ọhụrụ ndị ahịa ihe ịrịba ama elu. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ọzọ a bụ ihe kasị mkpa na-eji ego nke ndị ahịa na-mara enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ na-emekwa n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọrụ na-emecha ịrịba ama elu maka 9,99 kwa ọnwa pan na e awa site na ụlọ ọrụ na nke a. Ọ na-emekwa n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi ọkaibe ọrụ kpam kpam free nke mbụ ụbọchị 30:
A na-enye na-enye ohere onye ọrụ iji na-enweta ego n'elu adịchaghị atụmatụ enweghị ihe ọ bụla nke na maka ọzọ ọnwa 3 onye ọrụ nwere ike na-enweta adịchaghị n'ihi na dị nnọọ $ 1 kwa ọnwa enweghị ihe ọ bụla hassle. Ọ na-emekwa n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe ọrụ na kacha nta na-eri na-emesị nweta kasị mma amụọ na nke a na n'elu notch music ụlọ ọrụ dị ka mma. The Spotify ka mgbe gbagote na ihe kasị mma amụọ na maka otu ihe Ọ bụkwa ihe na nwunye nke otu usoro
Aha na metric
Ọtụtụ nde tracks dị n'otu ntabi
Play na nzukọ gị MP3
Ọ dịghị oge ókè
Trial version ego
60 ụbọchị free ego
Ee Ọ dịghị Ee Ee Ọ dịghị
Ee Ọ dịghị Ee Ee Ee
Ee Ee Ọ dịghị Ee Ọ dịghị
Ụbọchị 30 ego
Ọnwa 3 ego
> Resource> Spotify> otú ọtụtụ Ihe Ị Maara Banyere Ndị a Spotify Discount?